Wasaarada Arrimaha gudaha oo ku dhowaaqday in Dib U Dhac ku yimid shirka maamul u sameynta Gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe – STAR FM SOMALIA
Wasaarada Arrimaha gudaha oo ku dhowaaqday in Dib U Dhac ku yimid shirka maamul u sameynta Gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe
Wasaarada Arrimaha Gudaha Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa ku dhowaaqday in dib loo dhigay shirkamaamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Afhayeen Wasaarada Arrimaha Gudaha C/fataax Daahir Mire ayaa sheegay in sababo badan awgeed dib loogu dhigay shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Hase yeeshee afhayeenku ma carabaabin xilliga la qaban doono shirka oo la qorsheynayay in uu bilowdo 1da bisha September.Taasoo shaki weyn gelinaysa qabsoomida shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Qabashada shirkan ayaa waxaa hareeyay khilaafyo isdabajoog ah waxaana shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu heshiin waayay qaabka loo soo xulayo guddiga farsamada shirka.
Guddoomiyaasha labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe C/fataax Xasan Afrax iyo Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa labaduba waxa ay haatan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho.
Guddoonka Baarlamaanka Somalia Jawaari Oo Loo Soo Gudbiyay Mooshin kale
Dawlada Kenya Oo sheegtay In Dabagal Lagu sameeyo Dhalinyarad Katagta Dlaka Kenya